Google Chrome ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ password တွေအကုန်လုံးပြန်ယူမယ်ဆိုရင် – DigitalTimes.com.mm
218 Shares 132 Views
Google Chrome ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ password တွေအကုန်လုံးပြန်ယူမယ်ဆိုရင်
လုံခြုံအောင်ဆိုပြီး password တွေကို အရှည်ကြီးတွေပေးပြီး ပြန်ဝင်မယ်ဆိုမှ မေ့နေတတ်တာမျိုးဖြစ်ဖူးပါသလား?? ကိုယ်မမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် Chrome တို့ တခြား browser တွေကိုသိမ်းခိုင်းပြီး ဝင်မယ့်အချိန်မှ password ကို အော်တိုဖြည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် auto-fill password တွေက ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကိုဝင်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက်လွယ်သွားပေမယ့် သူများတွေလည်းလွယ်လွယ်ဝင်လို့ရနေတဲ့အတွက် စိတ်မချရပါဘူး။ password manager တစ်ခုခုသုံးရတာလည်း အလုပ်တွေရှုပ်တဲ့အတွက် Google က password တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသိမ်းလို့ရမယ့် feature တစ်ခုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Chrome browser မှာသိမ်းထားသမျှ password တွေအကုန်လုံးကို ပြန်ယူသိမ်းလို့ရဖိုဆိုတာ အရင်ကတော့ တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ အခု chrome မှာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ သိမ်းထားသမျှ password တွေအကုန်လုံးကို ကွန်ပျူတာကိုထဲကို ဘယ်လိုပြန်သိမ်းမလဲကြည့်လိုက်ရအောင်
၁. Address bar မှာ “ Chrome:// flags” လို့ရိုက်ပြီး “Enter” ကိုနှိပ်ပါ။
၂. အောက်ထိ scroll ဆွဲချပြီး “Password export” ဆိုတာကိုရှာပါ။ Ctrl+F ကိုနှိပ်ပြီးရိုက်ရှာလည်းရပါတယ်။
၃. Password export ရဲ့ dropdown menu ကနေ enable ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
၄. “Relaunch now” ဆိုတာလေးပေါ်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Chrome ကိုပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၅. Chrome ရဲ့ ညာဘက်ထိပ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ အစက်၃စက် Setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ဆုံးက “Advanced” ဆိုတာကိုသွားပါ။
၆. “Passwords and forms” ကိုသွားပြီး “Manage passwords” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၇. List ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ အစက်သုံးစက်နဲ့ menu ကို နှိပ်ပြီး “Export passwords” ကိုရွေးလိုက်ပါ။
ပြီး၇င်တော့ .csv ဖိုင်အနေနဲ့ password တွေကိုသိမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ password တွေကို သိမ်းပြီးရင်တော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ password manager မှာ import လုပ်ပြီးလည်း ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါကိုမှ ကိုယ်ရဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့ဆိုဒ်တွေိကို တစ်ယောက်ယောက်ကဝင်မှာ ထပ်စိုးရိမ်နေသေးတယ်ဆိုရင် “two-factor” , “multi-factor” authentication တွေခံပြီးသုံးလို့လည်းရနိုင်ပါသေးတယ်။
Password တွေလုံခြုံဖို့ password manager နဲ့တင်မဖြစ်သေးပါဘူး။ auto-fill နဲ့သာလုပ်ထားရင်ပိုဆိုးပါသေးတယ်။ ဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့ရနေတော့မှာပါ။ ဒီတော့ လိုတဲ့အချိန်မှ import လုပ်ပြီသုံးလို့ရနိုင်တဲ့ chrome ရဲ့ feature လေးက အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Ref: Google, MakeTechEasier
လုံခွုံအောငျဆိုပွီး password တှကေို အရှညျကွီးတှပေေးပွီး ပွနျဝငျမယျဆိုမှ မနေ့တေတျတာမြိုးဖွဈဖူးပါသလား?? ကိုယျမမှတျနိုငျဘူးဆိုရငျ Chrome တို့ တခွား browser တှကေိုသိမျးခိုငျးပွီး ဝငျမယျ့အခြိနျမှ password ကို အျောတိုဖွညျ့ခိုငျးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ auto-fill password တှကေ ဝဘျဆိုဒျတှကေိုဝငျတဲ့အခါ ကိုယျ့အတှကျလှယျသှားပမေယျ့ သူမြားတှလေညျးလှယျလှယျဝငျလို့ရနတေဲ့အတှကျ စိတျမခရြပါဘူး။ password manager တဈခုခုသုံးရတာလညျး အလုပျတှရှေုပျတဲ့အတှကျ Google က password တှကေိုဒေါငျးလုပျဆှဲသိမျးလို့ရမယျ့ feature တဈခုထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။
Chrome browser မှာသိမျးထားသမြှ password တှအေကုနျလုံးကို ပွနျယူသိမျးလို့ရဖိုဆိုတာ အရငျကတော့ တျောတျောမလှယျတဲ့ကိစ်စပါ။ အခု chrome မှာသုံးနိုငျတယျဆိုတော့ သိမျးထားသမြှ password တှအေကုနျလုံးကို ကှနျပြူတာကိုထဲကို ဘယျလိုပွနျသိမျးမလဲကွညျ့လိုကျရအောငျ
၁. Address bar မှာ “ Chrome:// flags” လို့ရိုကျပွီး “Enter” ကိုနှိပျပါ။
၂. အောကျထိ scroll ဆှဲခပြွီး “Password export” ဆိုတာကိုရှာပါ။ Ctrl+F ကိုနှိပျပွီးရိုကျရှာလညျးရပါတယျ။
၃. Password export ရဲ့ dropdown menu ကနေ enable ကိုရှေးပေးလိုကျပါ။
၄. “Relaunch now” ဆိုတာလေးပျေါလာရငျ နှိပျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ Chrome ကိုပိတျပွီး ပွနျဖှငျ့ပေးပါလိမျ့မယျ။
၅. Chrome ရဲ့ ညာဘကျထိပျထောငျ့မှာရှိတဲ့ အစကျ၃စကျ Setting ကိုနှိပျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အောကျဆုံးက “Advanced” ဆိုတာကိုသှားပါ။
၆. “Passwords and forms” ကိုသှားပွီး “Manage passwords” ကိုနှိပျလိုကျပါ။
၇. List ရဲ့ထိပျဆုံးမှာရှိတဲ့ အစကျသုံးစကျနဲ့ menu ကို နှိပျပွီး “Export passwords” ကိုရှေးလိုကျပါ။
ပွီး၇ငျတော့ .csv ဖိုငျအနနေဲ့ password တှကေိုသိမျးပေးပါလိမျ့မယျ။ password တှကေို သိမျးပွီးရငျတော့ ကိုယျသုံးခငျြတဲ့ password manager မှာ import လုပျပွီးလညျး ထညျ့သုံးလို့ရပါတယျ။ ဒါကိုမှ ကိုယျရဲ့အခကျြအလကျတှပေါတဲ့ဆိုဒျတှေိကို တဈယောကျယောကျကဝငျမှာ ထပျစိုးရိမျနသေေးတယျဆိုရငျ “two-factor” , “multi-factor” authentication တှခေံပွီးသုံးလို့လညျးရနိုငျပါသေးတယျ။
Password တှလေုံခွုံဖို့ password manager နဲ့တငျမဖွဈသေးပါဘူး။ auto-fill နဲ့သာလုပျထားရငျပိုဆိုးပါသေးတယျ။ ဝငျခငျြတိုငျးဝငျလို့ရနတေော့မှာပါ။ ဒီတော့ လိုတဲ့အခြိနျမှ import လုပျပွီသုံးလို့ရနိုငျတဲ့ chrome ရဲ့ feature လေးက အားလုံးအတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ထငျပါတယျ။
Apple က iOS 12 မှာ iPhone ရဲ့ NFC Chip ကို Third Party များ သုံးနိုင်အောင် ပြုလုပ်မည်